Caano - Gpedia, Your Encyclopedia
Koob caano dheey ah
Cunto fudud, Cabitaan
Kuleyl, Qaboow iyo dhexdhexaad
Nafaqo, dux, Kaalshiyaam
Caano (Af Ingiriis : Milk; Af carabi: حليب) waa dareere leh midab cadaan ah kaasi oo ka yimaada naasaha xayawaanka naasleyda iyo qaar ka mid ah dhirta. Caanuhu waxay ka mid yihiin cuntada dabiiciga ah ee dadka iyo in badan oo xaywaanka ka mid ah quutaan. Sidoo kale caanuhu waxay leeyihiin nafaqo iyo macdano aad u badan oo jidhka dadku u baahan yahay.
Caanuhu waa shay dareere ah oo la cabo, tusaale ah ilmuhu markuu dhasho waa waxa kaliya ee igu horeeya ee dhuunigiisa mara ama uu cabo caanahaas oo uu naaaska hooyadii ka helo, Mudada ugu haboon uu ilmaha yari caano nuujirta uu ubaahan yahayna waa 2 sano ugu badnaan, waxaaa kaloo caanaha aynu ka helnaa xoolaha aynu dhaqano sida geela, adhiga iyo lo'da.
Soo saarka caanaha
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Caano&oldid=168734"